icfc finance limited(icfc finance limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
ऋणपत्र निश्कासनमा आइसीएफसी फाइनान्सले इतिहास रच्यो, ब्याज वार्षिक १२%
काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुले मात्र निश्कासन गर्दै आएको ऋणपत्र अब आइसीएफसी फाइनान्सले पनि निश्कासनको तयारी गरेको छ । नेपालको इतिहासमै “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरु पश्चात् नेपाल राष्ट्र बैंंकबाट अनुमति प्राप्त गरी डिवेञ्चर निष्कासन गर्ने पहिलो वित्तीय संस्थाको रुपमा आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड अगाडि आएको छ । यो फाइनान्स...
काठमाण्डौ । आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद नाफामा ४१.३३ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सफल भएको छ । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। संस्थाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद नाफामा ४ करोड ६ लाख रुपैयाँ बढी कमाउन सफल भएको...
नेपाल राष्ट्रबैंकबाट स्वीकृति प्राप्त तथा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)मा सूचीकृत राष्ट्रियस्तरको फाइनान्स कम्पनीहरुमा चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासको रिपोर्ट अनुसार कम्पनीको पुँजी, निक्षेप तथा कर्जाको आकार र नाफाको हिसाबमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने कम्पनीमा पर्छ आइसीएफसी फाइनान्स । काठमाडौंको टंगालमा मुख्य कार्यालय रही...
स्वरोजगार लघुवित्तले सेयरधनीलाई २०% बोनस सेयर दिने, आइसीएफसीको जोड नगद लाभांशमा
काठमाण्डौ । स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडले आफ्ना सेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको छ । कम्पनीको साउन ३१ गते बसेको १७१ औं बोर्ड बैठकले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.०५२६ नगद लाभांश वितरणको निर्णय गरेको हो । यो निर्णय नियामक नेपाल राष्ट्रबैंकबाट स्वीकृत भएपछि र कम्पनीको वार्षिक...
आइसीएफसीका सेयरधनीले पाउने भए १०% सेयर र ११.०५% नगद लाभांश
काठमाण्डौ । आइसीएफसी फाइनान्स लिमीटेडले आर्थिक वषृ २०७३/७४ को नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई २१.०५ प्रतिशत लाभांश वितरणको निर्णय गरेको छ । भदौ २२ गते बसेको कम्पनीको २१२ औं संचालक समितिको बैठकले १० प्रतिशत बोनस सेयर र ११.०५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको निर्णय गरेको हो । यो निर्णय नेपाल राष्ट्रबैंक र कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट...
आइसीएफसी फाइनान्सको नाफा कति बढ्यो ?
काठमाण्डौ । आइसीएफसी फाइनान्सले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १९ करोड ५२ लाख खूद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यसतो नाफा १४ करोड ६८ लाख मात्र थियो । यो फाइनान्स लागत खर्च डरलाग्दो गरी वृद्धि भएका कारण अपेक्षित नाफा हुन नसकेको हो । फाइनान्सले यो अधिमा ६ अर्ब ७९ करोड निक्षेप संकलन गरी ५ अर्ब ५८ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ५ अर्ब...